यो एक स्मार्ट र दिन लायक होटल, हाम्रो देश को राजधानी मा स्थित छ। आज हामी विस्तृत यस होटल छलफल हुनेछ। तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि हामी सुरक्षित सुरु गर्न सक्नुहुन्छ!
होटल "छुट्टी Inn मास्को Sokolniki" पर्यटकहरु र व्यापार अतिथि काम गर्न को लागि दुवै, यो सुविधाजनक स्थित छ, शहर को केन्द्र मा स्थित छ।
होटल सबवे वा ट्याक्सी द्वारा पुग्न सकिन्छ। पनि सुविधाजनक स्थान नजिकैको आकर्षणहरू खडा निरीक्षण गर्न होटल बाहिर प्राप्त गर्न अवसर प्रदान गर्दछ।
होटल "छुट्टी Inn मास्को Sokolniki"4तारा र एक बहु-मंजिल्ला जटिल, जहाँ विभिन्न सुविधा प्रत्येक तल्ला मा अवस्थित छ छ। होटल रेस्टुरा र जहाँ तपाईं स्वादिष्ट भोजन, पेस्ट्री र शीतल पेय को एक किसिम आनन्द उठाउन सक्छौं अतिथि, को लागि एक पल्ट छ।
यसको सुविधाजनक स्थान, होटल ट्याक्सी, मेट्रो, बस, र यति मा। डी होटल गरेको मनोरंजन सुविधाहरु, राम्रो सेवा र ग्राहकहरु व्यक्तिगत दृष्टिकोण द्वारा पुग्न सकिन्छ।
जसले जो विभिन्न देशका आउन जो ग्राहकहरु लागि सुविधाजनक छ, विदेशी भाषा बोल्न मात्र विशेषज्ञहरु रोजगारी प्रदान गर्दछ। होटल सुधार सान्त्वना एक नम्बर पनि समावेश छ। होटल को प्रत्येक कोठा भन्यो स्तर पूरा गर्दछ।
होटल निःशुल्क इन्टरनेट पहुँच देखि लिएर र आवश्यक भएमा एक कल ट्याक्सी समाप्त सेवाहरूको एक किसिम प्रदान गर्दछ। होटल "छुट्टी Inn मास्को Sokolniki"9फर्श छ। यो अक्सर साँझ मनोरञ्जन र बुफे, जहाँ तपाईं पूर्ण खोलन बाहिर द्वीपसमूह सक्नुहुन्छ को एक किसिम होस्ट। विभिन्न सम्मेलन मा पनि बाहिर त्यहाँ560 एक मान्छे समायोजित गर्न सक्ने विशेष कोठा छन् रूपमा, भवन लगे गर्न सकिन्छ।
जमीन भुइँमा त्यहाँ जहाँ तपाईं होटल मा एक कोठा बुक गर्न सक्छन् र अनुकूल सेवा को आश्वासन दिए एक स्वागत छ।
दोस्रो तल्ला मा रेस्टुरेन्ट र तपाईं आराम र आफ्नो नि: शुल्क समय वा सहकर्मीसँग व्यवसाय बैठक खर्च गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ बारहरू छन्।
कोठा को माथिल्ला तलाहरू आवास भरियो। होटल "छुट्टी Inn Sokolniki मास्को" सबै 523 कोठा पूर्ण सान्त्वना र सुविधा प्रदान गर्नुहोस्। यो होटल एक विशाल प्लस छ - होटल तिनीहरूले सबै सुविधाहरु र अतिरिक्त विशेष उपकरण पाउनुहुनेछ जहाँ अशक्तताको, संग मान्छे को लागि कोठा छ।
आफ्नो तथ्याङ्कले हेर्दै निम्ति, यात्रा गर्दा पनि, होटल स्विमिंग पूल, जिम र सना संग एक फिटनेस क्लब छ।
एक लाँड्री र सुक्खा सफाई पनि छ। जो कोहीले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ र धुने वा सुक्खा-साफ मेरो लुगा र कुराहरू पारित गर्न। यो भाग मा सेवा धेरै फलदायी छ, र कुरा नयाँ हेर्नेछ।
डिजाइन होटल "छुट्टी Inn Sokolniki मास्को" एक क्लासिक र व्यापार सिर्जना गरियो। यो शैली अनुरूप र सहज कोठा छ।
हल र गलियारों डिजाइन स्पेस साँचो sophistication दिन्छ जो एउटा शास्त्रीय शैली, सजाया छन्। प्रत्येक कोठा व्यक्तिगत सजाया छ। मानक कोठा जो कोठा नेत्रहीन थप विशाल र अधिक आरामदायक बनाउन हल्का बेज रंग, सजाया छन् देखि लिएर, र खत्म सूट, विभिन्न रंग मा नरम प्यास्टेल रंग मा सजाया जुन।
होटल "छुट्टी Inn Sokolniki मास्को" मा कोठा सान्त्वना को उच्चतम स्तर मा निर्माण। प्रत्येक कोठा आरामदायक बेड, र विभिन्न अतिरिक्त वस्तुहरु र उपकरणहरू संग सुसज्जित छ।
प्रत्येक कोठा चिया वा कफी बनाउन सुविधाहरु, मा-कोठा सुरक्षित, मिनी बार, साथै अन्य फर्नीचर लक्जरी। मूल्य नास्ता समावेश छ।
साथै, मागका कोठा अतिरिक्त rollaway बेड र बच्चा पालने मा सेवा गर्न सकिन्छ। नम्बर आफ्नो परिवार संग कल गर्न सक्छन् र परिवार सबै सदस्यहरूको लागि पर्याप्त ठाउँ चिन्ता छैन। बच्चाहरु को लागि केही सेवाहरू प्रदान।
होटल मा मानक कोठा बेज टन वार्मिंग सजाया छन्। शवर जेल, साबुन, स्याम्पु र प्रसाधन: कोठा पनि निःशुल्क इन्टरनेट पहुँच, एक ठूलो दर्पण, फलाम संग एक बाथरूम र इस्त्री बोर्ड र आवश्यक स्वच्छता उत्पादनहरु छ।
सबै मानक कोठा विशाल र ठाउँ खाली धेरै छन्।
कोठा श्रेणी स्टुडियो
यी कोठा तिनीहरूले स्टूडियो थप समान छन् भन्ने मा अलग हो, यो एक सुत्ने र संयुक्त जीवित कोठा छ। पनि यो कोठा मा त्यहाँ एक कार्यस्थल छ। यो काम सुविधा जो सुन्दर सजावट र सहज सामान, सुसज्जित छ।
त्यहाँ एउटा ठूलो स्नान र विशाल संग एक बाथरूम छ व्यर्थ दर्पण। आकार मा एक गुणवत्ता स्नानवस्त्र र चप्पल, ब्रांडेड कस्मेटिक उपकरणहरू र लागूपदार्थ, ताजा, उच्च गुणवत्ता लिनेन्स संग आरामदायक बेड, चिया र कफी, सहज सुरक्षित, फलाम को एक मानक सेट र इस्त्री बोर्ड - पनि कोठा मा त्यहाँ फोन, आवश्यक वस्तुहरू छन्।
सुविधा र कोठा को उत्कृष्ट सौन्दर्य सान्त्वना कोठा र डिजाइन रूपमा, कुनै पनि आगन्तुक प्रभावित प्राण खुसी पार्न विफल हुन सक्दैन हुनेछ!
उच्च कोठा मानक देखि विशेष फरक छैन, तर थप विशाल र ठूलो सुत्ने र एक ठूलो आरामदायी सोफा छन्। साथै सबै आवश्यक मा-कोठा र त्यहाँ एक कार्यस्थल, कि छ, लेखन डेस्क र कुर्सी र एक ठूलो बाथरूम दर्पण छ। पनि कोठा मा त्यहाँ एक हेअर अनिवार्य छन्।
यो कोठा मास्को त्यहाँ तपाईं आवश्यक सबै संग, सुसज्जित छ जो काम सहज र सजिलो बनाउन काम, एक विशाल क्षेत्र कोठा मा रूपमा, एक व्यापार यात्रा मा, व्यापार मुद्दाहरू आएको मानिसहरूलाई लागि हो।
कोठा धनी रंग मा सजाया छ र एक जो कोठा थप सहज बनाउँछ, सुन्दर सजाया। स्नान र चप्पल, ब्रांडेड कस्मेटिक उपकरणहरू र उत्पादन, साथै ओछ्यानमा: कोठा मा कुराको त्यहाँ अनिवार्य छन्। चिया र कफी, सहज सुरक्षित, फलाम र इस्त्री बोर्ड लागि मानक सेट - आपतकालीन नम्बर एक अत्यावश्यक विशेषता।
विलासिता कार्यकारी कोठा
यो कोठा दुई कोठा, रातो को रंग मा सजाया छ, यो आधुनिक डिजाइनमा निहित छ। कोठा निद्रामा सुखद र सहज बनाउन, हाडजोर्नी गद्दा संग एक आरामदायक राजा आकार बेड छ।
साथै, यसलाई उच्च गुणस्तरीय सामान समावेश छन्: एउटै ओढ्ने र चप्पल मात्र थप महान सामाग्री र finishes। स्वच्छता उत्पादनहरु उच्च गुणवत्ता प्रदान गरिन्छ। कस्मेटिक्स र सूचीमा संलग्न उपकरणहरू सामान अवश्य-छ।
मा कार्यकारी सुइट ठूलो लाभ सबै उपकरण र विलासिता एउटा छुट्टै भान्सा गर्न छ। कोठा मा एक चिया र कफी निर्माता, फलाम र छन् इस्त्री बोर्ड र सुरक्षित र आरामदायी। यहाँ तपाईँले पूरा सान्त्वना र उत्कृष्ट सौन्दर्य मा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
यो कोठा बिल्कुल सबै सुखसुविधा छ। यो नेत्रहीन थप विशाल बनाउन, बेज न्यानो, न्यानो रंग बनेको छ देखि कोठा को शैली, कुनै पनि अतिथि प्रभावित हुनेछ।
कोठा विशाल सहज काम क्षेत्र, अलग भान्सा, एक ठूलो संग जीवित कोठा छ आधुनिक सोफा र बेडरूम हाडजोर्नी गद्दा एक राजा आकार बेड। यो कोठा एक आरामदायक विस्तारित रहन को लागि सबै कुरा छ!
कि होटल छन् सेवाहरूको सूची:
सिमुलेटर र खेल उपकरण सबै प्रकारका छ जो घण्टा जिम;
आफ्नो कोठा घण्टा क्रम खाना। विभिन्न व्यञ्जन, सबै स्वाद को लागि व्यवहार र पेय।
एक निश्चित संख्यामा ढकढक्याउन होटल कर्मचारी को के आउँछ छ, र एक विशेष समयमा अतिथि wakes एक सेवा: "मलाई उठाउ"।
होटल "छुट्टी Inn मास्को Sokolniki" को कोठा मा प्रदान सेवाहरु:
Bathrobe र चप्पल राम्रो गुणस्तर को हो।
मा-कोठा सुरक्षित (सुविधाजनक र प्रयोग गर्न पर्याप्त सजिलो)।
सबै स्वाद अनुरूप तकियों विभिन्न विकल्प।
राम्रो र आरामदायी बाँकी अनुमति दिन्छ जो बेड, मा हाडजोर्नी गद्दे।
दैनिक सफाई अनुरोध मा कोठा र दासी सेवा।
एक व्यक्ति आधारमा वातानुकूलित, अर्थात् तापमान, हावा प्रवाह अतिथि आफूलाई परिभाषित।
होटल "छुट्टी Inn मास्को Sokolniki" को कोठा बाहिर सेवाहरू:
कार मालिक र ट्रक लागि पार्किंग र गैरेज।
, कुरा वा वस्तुहरू राखन आवश्यक छ भने;
वितरण र आफ्नो नगद जम्मा लागि एटीएम।
मुद्रा विनिमय। दायाँ होटल निर्माण मा स्थित।
आगंतुकों, परिवार र पर्यटकहरुका लागि उपहार पसल।
ट्याक्सी बुकिंग (रिसेप्शन मा गरे)।
नम्बरमा सामान (यो व्यक्तिगत प्रभाव को यातायात सुविधा मौका दिन्छ)।
होटल निर्माण भर निःशुल्क इन्टरनेट पहुँच।
होटल मा धेरै रेस्टुरेन्ट र बारहरू छन्।
दोस्रो तल्ला मा रेस्टुरेन्ट "रक्सी बगैचा" छ। यहाँ आगंतुकों आनंद से जहाँ त्यहाँ खाना र मासु र शाकाहारी व्यञ्जन छ वैविध्यपूर्ण मेनु, हैरानी गरिनेछ। ककटेल को एक किसिम र पेय पदार्थ पनि आगंतुकों प्रभावित पक्का छन्। त्यहाँ दुवै मादक र शीतल पेय को एक विशाल चयन छ।
र यस्तो ठाउँमा, एक होटल "" छुट्टी Inn मास्को Sokolniki "जस्तै, जहाँ तपाईं banquets र कर्पोरेट सभाहरूमा संगठित गर्न रेस्टुरा" मास्को "छ। रेस्टुरेन्ट 400 मान्छे सम्म अटाउँछन्। नाश्ता, चिसो, entrées एक किसिम अचम्मको छ। रेस्टुरेन्ट "मास्को" (Sokolniki, "छुट्टी Inn") साँझ को sleeker लागि राम्रो, अनुकूल अवस्था छ।
क्याफे "पटाङ्गिनी" यो सादगी र सौन्दर्य कि आगन्तुक देखाउने!
ग्रिल र बार कुनै पनि आगन्तुक राम्रो वैविध्यपूर्ण मेनु, पेय पदार्थ को एक चयन ठीक चकित हुनेछ। यो स्थानमा कम्पनी मा आराम र सहयोगिहरु वा साझेदार संग एक व्यापार भोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
cappuccino एक कप संग पट्टी को सहज वातावरण मा, अतिथि वाइफाइ रमाइलो गर्न सक्षम छन्।
ठूलो स्क्रिनमा विशाल हल मा लगातार सबैभन्दा रोचक खेल शो र घटनाहरू प्रसारण।
मुख्य फाइदा कर्पोरेट दल, घटनाहरू र banquets व्यवस्थित गर्न यी संस्थाहरु को क्षमता छ। यी उत्सव कारण व्यावसायिक शेफ र सुन्दर वातावरणमा .. यी ठाउँमा के तपाईं एउटा सम्मानजनक र सहज वातावरणमा एउटा साँझ खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने, receptions, विवाह, सभा खर्च गर्न सक्छन् एक उच्च स्तर मा आयोजित गरिनेछ।
"छुट्टी Inn मास्को Sokolniki" समीक्षा ज्यादातर सकारात्मक छ। मान्छे राम्रो सेवा र एक राम्रो सेटिङ प्रशंसा गर्छौं। यो संस्थाले मा कर्मचारी मात्र एक मुस्कान र दयालु ग्राहकहरु र पर्यटकहरूलाई पर्छ किनभने यो छ। यो होटल धन्यवाद, र जस्तै लगभग सबै अपवाद बिना मान्छे।
पनि राम्रो सेवा र सेवा छिटो प्रशंसा गर्छौं। अधिक ग्राहकहरु आनन्द सान्त्वना र जीवन थप रमाइलो र धनी बनाउन सेवाहरूको एक ठूलो दायरा, र बाँकी - सजिलो संग।
सम्पर्क र फेला पार्न कसरी
सम्पत्ति सम्पर्क गर्न, तपाईंलाई सूचीबद्ध सम्पर्क सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
"छुट्टी Inn मास्को Sokolniki": फोन: 8 (800) 700-84-29 वा +7 (495) 786-73-73। तपाईं दिन को कुनै पनि समय कल गर्न सक्नुहुन्छ।
"छुट्टी Inn मास्को Sokolniki", ठेगाना: सडक Rusakovskaya 24।
पर्यटकहरू, नम्बर हुनेछ मा सार्न तयार, र सान्त्वना र सौन्दर्य को आकर्षक वातावरण। होटल आवास बनाउन देशी वा विदेशी नागरिक को पहिचान साबित कागजातको प्रस्तुति अनुसार कार्यान्वयन भएको छ। याद कि ठेगाना "छुट्टी Inn मास्को Sokolniki": सेन्ट। Rusakovskaya 24।
आरक्षण बस माथिको संख्यामा कल वा होटल वेबसाइटमा भ्रमण गर्न। एक विशाल पोल धेरै समय र प्रयास आवश्यक छैन भनेर यस्तो जगेडा विधि प्रयोग को सजिलो छ।
«छुट्टी Inn Sokolniki मास्को" (सेन्ट Rusakovskaya घर №24।) - बिना लिङ्ग, उमेर, जाति, आदि तपाईंले सधैं रूसी राजधानी आउन जो विश्वभरिबाट पर्यटकहरु स्वागत गर्दै छन्, कुनै अपील गर्नेछ भन्ने होटल छ .. राम्रो आराम गर्न।
को "छुट्टी Inn Sokolniki मास्को" आउन, रमाइलो, आराम र रूस मा सबै भन्दा स्मरणीय सप्ताह फेरि फेरि दोहोर्याउन फेरि जहिले पनि फिर्ता आउन। शुभकामना छ!
पूर्व गर्न उत्तर देखि: कहाँ ओम्स्क छोड्न
भीर बीच होटल र स्पा4*: होटल विवरण, समीक्षा। बुल्गेरियामा बिदाहरू
बच्चा समर्थन लागि दण्ड को विधिशास्त्र: रिकभरी लागि आधारमा र दण्ड को राशि
ओवन मा पोर्क को सुगन्धित औलाको जौर्नी
अनुपयुक्त निर्भर aypad भने के गर्ने?